I-Spotify Ithuthukisa Ukusebenza | TeraNews.net
Isoftware ye-Spotify ithuthukisa ukusebenza
umbhali UKravetz Pavel Kushicilelwe ku 07.12.2020
Isithombe-skrini esithandekayo sohlobo lwe-Beta lohlelo lokusebenza lwe-Spotify sesifikile ku-Intanethi. Kukhona kungenzeka ukuthi uhlelo lweSpotify lwenza ngcono ukusebenza. Isevisi yokusesha umculo emitatsheni yezincwadi yomuntu siqu izovela kumasethingi uma kungekho ukuxhumana ku-database yohlelo lokusebenza.
Yini i-Spotify nokuthi Kungani Uyidinga
I-Spotify insiza ekuvumela ukuthi ulalele ngokusemthethweni umculo online kwi-Intanethi. Isici esiyinhloko sohlelo ukusebenza kwaso ama-algorithm. Kwanele ukulalela izingoma ezimbalwa zensiza ukuze zivumelane ngokuzenzakalela nokunambitheka komculo komlaleli. Ekupheleni kokudlala kohlu lwadlalwayo, uhlelo ngokwalo luzothola umculo omusha bese lucebela ukuwulalela. Ngokuya ngokubuyekezwa komsebenzisi, ama-99% wohlelo “aqagela” intshisekelo yomnikazi.
Ungakhohlwa futhi ngokulanda amaqoqo womculo ezifufuleni unaphakade. Isevisi uqobo ihlanganisa amaMixes wamathrekhi athandwa kakhulu ngosuku, isonto, inyanga, unyaka. Ungahlela umculo ngokuya ngemibandela ehlukene.
Kufanele ukhokhe ukusebenzisa iSpotify. Noma kunalokho, bhalisela isikhathi esithile sokusetshenziswa. Intengo yesevisi yehlukile ezweni ngalinye. Ubani obhala ithegi yentengo akwaziwa. Ngoba kwamanye amazwe acebile intengo yeSpotify ishibhile. Futhi emazweni ampofu (ngamagama afanayo wedola) kufanele ukhokhe izikhathi eziphindwe ka-5-10.
Vele, awudingi ukukhokha noma yini usebenzisa iSpotify mahhala. Kepha kufanele ubekezelele ukukhangisa, ukuvinjelwa kokulanda umculo kwisitoreji sakho. Futhi, ukuphazamiseka okumbalwa ngokushintshwa kwekhwalithi nokungenamkhawulo kwethrekhi.
Eqinisweni, abahleli bezinhlelo kufanele ngabe baqale ukusebenza okuthuthukile isikhathi eside. Ngemuva kwakho konke, uhlelo luyakhokhwa futhi insizakalo kufanele ibe sezingeni elifanele. Uhlobo lwe-Beta lungeze ikhono lokulalela umculo ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ukuze wenze lokhu, isithwebuli sizovela ohlelweni, oluzosesha amathrekhi kwisitoreji se-smartphone kuwo wonke amakhathalogi. Cishe, lokhu kusebenza kufana nensizakalo ye-YouTube "yokuxhuma okungaxhunyiwe ku-inthanethi".
Yize uhlelo lokusebenza lucela imali, lwenza kube lula kakhulu impilo yabasebenzisi. Ngokwemvelo kulabo abathanda imikhiqizo emisha, kunokuba "bakhuhle" amathrekhi amadala emigodini.
I-Xiaomi Mi 11 Ultra - IP68 protection be
Indlela entsha yokwenza imali ngamacala abhekene ne-Apple
IHonor Pad 7 yithebhulethi yokuqala yomkhiqizo ozimele waseChina
UXiaomi ukhuphukele endaweni yesithathu ekuthengisweni kwama-smartphones